यसरी जाँच्नुहोस् आफ्नो इन्टरनेटको स्पीड:: Naya Nepal
कहिलेकाँही हामीलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ठ्याक्कै कति स्पीडको इन्टरनेट दिएको हो भनेर सत्य नभनेको हुन सक्छ । सुरुमा भनेकै इन्टरनेट स्पीड दिएता पनि पछि गएर सेवा प्रदायकले कम गरिदिएको हुन सक्दछ ।यसलाई हामीले नै केही जाँच गरेर थाहापाउन सक्छौँ । तर जाँच गर्नुभन्दा पहिले प्रयोगकर्ताहरुले कुनै पनि डाउनलोड वा अपलोड गरिरहेको हुनु हुदैन् ।त्यसैगरी जाँच गर्दा भीपीएन पनि बन्द गर्नुपर्छ । इन्टरनेट स्पीड थहापाउने केही तरिकाको बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी दिदैं छौं ।
ओकला स्पीड टेस्ट
ओकला स्पीडटेस्टले सर्भर र डिभाइसको बिचमा डेटा ट्रान्सफर हुन कति समय लाग्छ भनेर थाहापाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।यसलाई प्रयोग गर्दा हरेक पटक वेबसाइटबाट कति स्पीडको नेट आइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी लिन सकिन्छ । यसको विन्डोज, म्याक, गूगल क्रोम आदिका लागी नेटिभ एप समेत रहेको छ ।यसमा गएर गो बटन मात्रै थिच्नुपर्दछ । एक पटक मात्रै भन्दा पनि पटकपटक जाँच गर्नुपर्दछ । त्यसपछि अन्त्यमा रिजल्ट लिङ्कमा थिच्न सकिन्छ । ग्लोबल इन्डेक्समा गएर भने विश्वव्यापी रुपमा इन्टरनेटको स्पीडहरु हेर्न सकिन्छ ।
अन्य केही स्पीड टेष्ट गर्ने तरिका
फास्ट डटकम साइटमा गएर पनि आफै नै स्पीड जाँच्न सकिन्छ । फास्ट डटकम वेबसाइटमा प्रवेश गरेपछि आफै इन्टरनेटको स्पीड टेष्ट हुन थाल्छ ।यो एन्ड्रोइड र आइओएसमा एपको रुपमा पनि उपलब्ध रहेको छ । त्यस्तै स्पीडअफ डटमी वेबसाइटबाट पनि स्पीड जाँच्न सकिन्छ । यसको उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया लगायतमा ११६ ओटा सर्भर रहेका छन् । यस्तो वेबसाइटहरुको प्रयोग गरेर इन्टरनेटको स्पीड जाँच गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पीसी म्याग स्पीड टेष्टको वेबसाइट प्रयोग गरेर पनि आफ्नो इन्टरनेटको स्पीड जाँच्न सकिन्छ ।
शिक्षण, शुक्रराज र पाटन अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पनि पाएनन् जोखिम भत्ता
सरकारले महामारीका वेला फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, दसैँको मुखमा समेत राज्यले दिने भनेको जोखिम भत्ता नपाएको स्वास्थ्यकर्मीले गुनासो गरेका छन् । महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई सरकारले सुरुवातमै ‘लेभल–थ्री’ अस्पतालका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सन्तकुमार दासले अहिलेसम्म सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता नपाएको बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनौँ । जे नियमित तलब हो, त्योबाहेक एक रुपैयाँ कहीँबाट आएको जानकारी छै्रन,’ संयोजक डा. दासले भने, ‘जोखिम भत्ता नदिने भए सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आस देखाउनु हुँदैनथ्यो ।’ यस्तो विषम परिस्थिति स्वास्थ्यकर्मीलाई काम लगाउन निकै कठिन भएको उनले बताए । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड सरुवारोग अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पनि जोखिम भत्ता नपाएको बताए । अझ शुक्रराज अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी त महिनौँदेखि घर जानसमेत पाएका छैनन् । अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार असारयता जोखिम भत्ता पाएको छैन । कोरोना महामारीका वेला देश र जनताका लागि भनेर काम गर्दा पनि जोखिम भत्ता नपाउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत ११ चैतदेखि जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । ३ चैतमा गरेको निर्णयमा प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ कर्मचारीलाई सुरु तलबको ७५ प्रतिशतले हुने रकम तथा सहयोगमा खटिने अन्य जनशक्तिलाई सुरु तलबको ५० प्रतिशत र दुवैको सहयोगमा खटिएका अन्य कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कर्मचारीले पनि साउनदेखि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । ‘हामीले असार मसान्तसम्मको भत्ता पाएका थियौँ, त्यसपछि पाएका छैनौँ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसयताको पाउने–नपाउने टुंगो छैन ।’ कोभिडका कारण प्रयोगशालाका कर्मचारी, चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स २४ घन्टा सेवामा खटिँदै आएका छन् । अझ वीर अस्पतालअन्तर्गतको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले त नियमित तलब पनि पाएका छैनन् । साउनयताको तलब नपाएको कर्मचारीले बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म कोभिड भत्ता, नियमित रूपमा खाइपाई आएको भत्ता पनि पाएको छैन । नियमित तलबसमेत खान नपाएको धेरै भयो,’ वीर अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष खुबराज आचार्यले भने । दसैँको मुखमा समेत कर्मचारीको तलब–भत्ता के हुन्छ भन्ने यकिन नभएको उनको भनाइ छ । भोको पेटमा सधैँ काम गर्न नसकिने जिकिर गर्दै तत्काल तलब–भत्ता उपलब्ध नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने आचार्यले बताए । जोखिममा काम गरेबापत पाउनुपर्ने कोभिड भत्ता, कोभिड बिमा क्षतिपूर्ति, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन बाँकी सेवा विस्तार भत्ता, शैक्षिक भत्ता, तलब भत्ता, औषधि खरिद खर्च, दसैँ खर्च तत्काल उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् । आइतबार नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी संगठन, कर्मचारी युनियन, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, अखिल नेपाल श्रमिक संघले संयुक्त रूपमा न्याम्सका उपकुलपति डिएन शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएका कारण जोखिममा काम गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम दिन नसकेको अस्पतालहरूले बताएका छन् । अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीलाई भत्ता नदिएर मन्त्रालयका कर्मचारीले भने नियमित जोखिम भत्ता बुझिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
काम गर्नेको भत्ता रोकेको छैन
डा. जागेश्वर गौतम ,प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
सरकारले फ्रन्टलाइनमा काम गरेको कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता रोकेको छैन । जो संक्रमितको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएका छन्, उनीहरूले मात्रै जोखिम भत्ता पाउने हो । तर, अहिले कामै नगर्ने कर्मचारीले पनि जोखिम भत्ता माग गरेका छन्, त्यो जायज छैन । मन्त्रालयले काम नगर्ने कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिन सक्दैन । वीर अस्पताललाई सुरुदेखि कोभिड बिरामी भर्ना गर भनेका थियौँ, उनीहरूले मानेनन् ।अहिले भत्ता मागेर सरकारले कुन आधारमा दिन्छ । अस्पतालमा भएका तीन सय शय्यामा कोभिड संक्रमित भर्ना गरेर सेवा सुरु गरिए सरकारले तत्काल आवश्यक रकम दिन्छ । प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि पनि अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामी भर्ना गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले आइसियूमा भर्ना भएका बिरामीको हकमा दैनिक १५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । त्यही रकमभित्रबाट अस्पतालले उपचारमा आबद्ध चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिने हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै भत्ता दिने होइन ।